किन टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकलाई कर्मचारीले आफ्नै कार्यकक्षमा रातभर थुने ? - SandeshMedia.com
किन टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकलाई कर्मचारीले आफ्नै कार्यकक्षमा रातभर थुने ?
६ श्रावण २०७८, बुधबार ०८:२०
काठमाडौं । दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लिराम अधिकारीलाई कर्मचारीले रातभर उनकै कार्यकक्षमा थुनेका छन् । रातभर कार्यकक्षमा कर्मचारीवाट थुनिएका अधिकारी विहान पख मात्र घर गएका छन् । कर्मचारीको माग दिउसो सम्म पुरा गराउने प्रतिवद्धता जनाएपछि उनलाई घर जान दिइएको थियो । कर्मचारीहरूले आफ्ना माग पुरा गराउन दबाब दिन प्रमुखलाई कार्यालयमै थुनेका हुन् ।
पछिल्लो केही समययता कर्मचारी विनियमावली संशोधनको विरोध गर्दै टेलिकम कर्मचारी युनियनहरू संयुक्त रुपमा आन्दोलनरत छन् । प्रबन्ध निर्देशक, उप प्रबन्ध निर्देशक (डीएमडी), निर्देशक जस्ता माथिल्लो तहका कर्मचारी स्वतः अवकाश हुने पुरानै व्यवस्थालाई हटाइएको छ । यो ब्यवस्था नै राख्नुपर्ने माग कर्मचारीको छ । यसअघि उप प्रबन्ध निर्देशक ५ वर्ष पुगेपछि तथा निर्देशक आठ वर्ष पछि स्वतः अवकासमा जानुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । तर त्यो ब्यवस्था हटाउन लागेको भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
माथिल्लो तहका कर्मचारी स्वतह अवकास पाउने ब्यवस्था हटाउँदा तल्लो तहका कर्मचारीको बढुवा रोकिने र उनीहरुले अवसर नपाउने भएकाले त्यसलाई कायम राख्नुपर्ने माग कर्मचारीको छ । उनीहरूले प्रबन्ध निर्देशक समेत आफ्नो कार्यकाल पुरा भइसकेपछि अवकास लिनुसट्टा फेरी पुरानै अवस्थामा प्रमुख भएर आउन पाउने ब्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन् । लोकसेवाले सिनियर तहका कर्मचारीको क्यापिङ हटाए पछि यो समस्या आएको हो । प्रबन्ध निर्देशकको हकमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकर्त निर्देशिका बमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको निर्देशिका अनुरूप हुँदा प्रबन्ध निर्देशक अधिकारी समेत कार्यकाल पछि फेरी सोही पदमा फर्कन पाउनेछन् । यसका साथै कर्मचारी युनियनहरूले स्वतः बढुवा हुने व्यवस्था समेत हटाउन नहुने माग राखेका छन् । यस अघिको स्वतः बढुवा (विशेष बढुवा) अनुसार योग्यता भएका कर्मचारीको ८ वर्षमा, सवारी चालकको ९ वर्षमा र योग्यता नभएका तर काम सन्तोषजनक भएको अवस्थामा १० वर्षमा स्वतः बढुवा पाउने व्यवस्था थियो । यो ब्यवस्था पनि लोकसेवाले हटाइदिएको छ । कर्मचारीहरुले त्यसको पनि विरोध गरेका छन् ।